Shiri yezuva archives
Tungamira vanorarama upenyu
Flickr nhengo dzeboka
Avibase inowanikwawo mumitauro inotevera:
Shingairira shanduro iri nani
Shanduro ye peji ino yakapedzwa nekubatsirwa kweGoogle automation translation tool. Shingairira shanduro iri nani
Mauya Guest | Log in | Register | | myAvibase | Kubuda
Avibase purogiramu yega yega
Avibase isiti yebasa rekutengeserana inowanikwa muCanada, yakatsaurirwa kunyanya kuunganidza uye kugovera ruzivo pamusoro pezvisikwa zvenyika. Avibase haina kukohwa kana kushandisa mashoko ehupenyu pamusoro pevashandisi varo nevashanyi kuti vaite zvekutengeserana. Izvo zvakadaro doe inounganidza humwe ruzivo rwehupenyu rwunoshandisa nenzira dzinotevera.
Kutanga, pamapeji anoda kushandiswa kwevashandisi (kuvhara uye password, yakadai seAvibase uye yeAvibase web services), tinochengetedza cookie inogara pakombiyuta yako kuitira chinangwa chekuchengeta purogiramu yako. Kana iwe ukasika Avibase pachake, zita rako, kero yeimeri, mutauro uye zvimwe zvido zvako, uyewo mazita ako ekuona zviri kuenderana nemabhuku ako ekuongorora, zvichengetwa mukati memaseva edu. Iyi ruzivo haigoni kugoverwa nevamwe vatatu uye inoshandiswa chete nechinangwa chokukuzivisa iwe paunoshandisa nzvimbo yeAvibase. Zita rako rinogona kuratidzwa mumagariro evanhu (semuenzaniso Vatariri vepamusoro vanoshuma), asi unogona kukumbira kuti usabvisa zita rako kubva pane zvaunofunga. Iwe unogona zvakare, chero nguva ipi zvayo, bvisa purogiramu yako nezvose zvakabatanidzwa nedzimwe, nekuenda kuAvibase profile yako nekudhonza pa "Delete profile".
Avibase anoshandisawo Google Analytics, web analytics service inowanikwa neGoogle, Inc. Google Analytics inoshandisa makiki, ayo ari mafaira akanyorwa pamakombiyuta ako, kubatsira webhusaiti kuti iongorore kuti vashandisi vanoshandisa sei nzvimbo. Mashoko aya anokonzerwa nekiki pamusoro pekushandisa kwako kwewebsite (kusanganisira IP yako, kunyange zvazvo izvi zvingave zvisingakwanisi nokuti tinovimba neInd anonymous feature feature) zvichaendeswa nekuchengetwa neGoogle kumaseji muUnited States. Google ichashandisa ruzivo urwu nokuda kwekuongorora kushandiswa kwako kwewebsite, kuunganidza mishumo yebasaiti ye webhusaiti kune vashandisi vepawebsite uye kupa mamwe mabasa ane chokuita newebsite uye kushandiswa kweterevhizheni. Google inogonawo kutumira mashoko aya kuvanhu vatatu apo inofanirwa kuita izvi nemutemo, kana kuti vanhu vatatu vakaita sei mashoko pamusoro peGoogle. Google haisati ichishandise idiresi yako yep IP nedzimwe nhepfenyuro inobatwa neGoogle. Iwe unogona kuramba kushandiswa kwekiki nekusarudza zvirongwa zvakakodzera pane browser yako, asi funga cherechedza kuti kana ukaita izvi haungakwanise kushandisa kushanda kwakakwana kwewebsite ino. Nokushandisa iyi webhusaiti, unobvumirana nekugadziriswa kwe data pamusoro pako neGoogle nenzira uye nekuda kwezvinangwa zvataurwa pamusoro apa.
Ndinowanzoedza kubvuma nezita rose vatsigiri vakandibatsira kuti ndivandudze Avibase kwemakore. Kana zita rako rinowanikwa mukubvuma, asi iwe unoda kuibvisa, chinyorwa nditaure neni . Kana iwe uchinzwa kuti zita rako rinofanira kunge riripo, ndapotawo ndiudzei, izvi zvinenge zviri kutarisa pane zvangu (kukumbira ruregerero!).
Avibase ndiyo kodzero yaDenis Lepage. Chibvumirano chakapiwa zvachose kuti zvibatane kune chero mapeji ewebsite, kusanganisira, asi kwete kuongororwa, mahofisi ekuongorora nzvimbo uye mapeji epafudzi.
Mifananidzo nemifananidzo zvakaratidzwa mukati meAvibase zvose zvinowirirana nekodzero yemunyori wavo wepakutanga, kunze kwekunge zvakaratidzwa kuburikidza nekodhi yekodhi yekodhi. Mifananidzo yose yakaratidzwa kubva pa Flickr API inoramba iri nzvimbo yevatsigiri vavo vepakutanga. Avibase haisi kuchengetedza mifananidzo yepacheji kubva ku API, asi inochengetedza zvikwereti kune vhidhiyo-yakakura shanduro. Mifananidzo yose inosanganisira zita remunyori (sezvakapa Flickr) uye inowananidzwa peji yevanyori paFlickr. Mifananidzo chete yakakonzerwa ne kutsvaga kwevanhu nevanyori vavo inoratidzwa muAvibase. Izvi zvinowanzoita kusarudzwa kwekutevedzera muFlickr, iyo inogona kushandurwa nemubati webhuku.
Kana iwe uri mufananidzo wemufananidzo weFlickr, uye unoda kukumbira kuti zvifananidzo zvako hazvisati zvichiratidzwa sezviguniti muAvibase, une zvingasarudzwa zvingasarudzwa. Chokutanga, iwe unogona ndibatsirei kuti mubvunze kuti mapikicha enyu haachazovi kuratidzwa, uye ini ndichafara kugombedzera nokukurumidza sezvandinokwanisa. Paunenge uchidaro, tapota tipewo zita rako rekaunti ye flickr, saka ini ndinokwanisa kuona nekugadzira firiji kuitira kuti mifananidzo yako isati yaonekwa. Chinhu chako chechipiri ndechekuchinja nzvimbo yekuratidzira yemamwe kana mapepa ako ose kuitira kuti vasisipo kune kutsvaga kwevanhu . Izvi zvinogona kuitwa pasi rose mukati memubhadharo yako yeFlickr, pasi pe Zvimiti uye zvibvumirano , kana pane mumwe nomumwe mufananidzo. Mushure mekunge mashandura chigadziro ichi, mifananidzo inogona kuratidzika se isina kuwana muAvibase, uye ichazobviswa zvachose.
Mifananidzo kubva kuAvibase banner yakashandiswa nemvumo kubva kune vadzidzisi vavo, avo vanowanzozivikanwa nekutengesa mouse yako pamusoro peimwe yemifananidzo kana kubata pamufananidzo.
Chibvumirano chekushandisa chero ipi zvayo mifananidzo yakaratidzwa muAvibase haigoni kupiwa neni uye inofanira kukumbirwa zvakananga kumubati wekodzero. Mimwe yemifananidzo yeFlickr inowanikwa kuti ishandiswe pasi peChina Creative Commons License, asi ibasa rako semushandisi kuti uone kuti ndei uye kuti uite maererano nemirairo yeisense yakabvumirwa. Iyi ruzivo inowanika paFlickr site pakunyorera mufananidzo.
Kana uine zvifananidzo zvaunoda kuita zviripo kuburikidza neAvibase, zvose zvaunoda kuita ndezvokuti zvifananidzo izvozvo zviwanikwe muAclick Flickr, uye uone kuti nhoroondo yako inobvumira kutsvaga pachenyu.
Kunyora zvisina kunaka
Kana iwe uchida kurondedzera mufananidzo usina kufanirwa unoratidzwa muAvibase, nzira yakanakisisa kana ukangosvinura chiduku chekona chinyorwa chiri kurudyi kwekona kuruboshwe pasi pemamwe mapikicha. Kushandiswa kwebhatani iyi kunofanira kugadziriswa kusingazivikanwi uye mifananidzo isiri kureva shiri. Chero mifananidzo yakabhanwa nenzira iyi ichazogadziriswa uye ichabviswa kana yakakodzera. Kana uchida, iwe unogonawo kupa vhoti kune chero mifananidzo kuburikidza nebhasi pasi pemufananidzo. Nhamba yevhoti yevhoti kusvika kure nevamwe vashanyi (kana inoshanda) inoratidzwawo pasi pemifananidzo. Pakupedzisira, unogona kushandisa bhodhi yemusuo, pane kona yakadzika yekona, kuti uchinje mufananidzo kune imwe sarudzo yakasarudzwa yemhando imwechete.